Global Voices teny Malagasy » Ny Fanambin’ireo Gazety An-tsoratra Ao Anatin’ny Fampitambaovaon’ny Teratany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Jona 2018 12:42 GMT 1	 · Mpanoratra Yásnaya Aguilar Gil Nandika avylavitra
Fanamarihan'ny Rising Voices : Ity lahatsoratra ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny Este País  ary nadika sy naverina navoaka rehefa nahazoana alàlana tamin'ny mpanoratra.
Ao anatin'ireny traikefa amin'ny fifandraisana anaty vondrom-pèiarahamonin'ny teratany ireny, ny fifandraisana an-tsoratra dia manana toetra mampiavaka azy tsy manam-paharoa. Raha toy ny mizotra amin'ny làlana hahatratrarany ny fara-tampony ny famokarana ho an'ny onjampeo sy ny haino aman-jery, somary miadam-pandeha kosa ny hafainganan'ny fivoaran'ny fifandraisana an-tsoratra. Ny endrika am-bavan'ny fampahalalambaovao toy ny onjampeo, fahitalavitra, ary ireo haino aman-jery hafa dia manamora amin'ny ankapobeny ilay dingana. Na iza na iza manana vata fandraisampeo na fitaovana hafa afaka handraisana na hilalaovana feo dia afaka ny ho isan'ireo olona misitraka ny fandaharana vokarina ho an'ny vondrom-piarahamonina. Ao amin'ny vohitra misy ahy, mihaino ny onjampeo Jënpoj Community Radio  ny renibeko, onjampeo miainga avy ao Tlahuitoltepec, vohitra mpifanolo-bodirindrina, izay azony atao eo am-panafànana ny “comal” (sakafo). Mandritra ny andro izy afaka mihaino ireo vaovao avy ao an-toerana, ny manerana ny firenena ary ny iraisampirenena amin'ny teny Mixe, mihaino fandaharana hirahira, adihevitra an-databatra momba ny katsaka nasiam-panovàna ara-tsiansa na ny fandefasana ny famaranana ireo lalao baskety fiadiana ny tompondakam-paritra “Mixe Regional Cup.”
Izaho manokana, mahafantatra ohatra vitsivitsy aho raha media an-tsoratra na gazety mpiseho aminà fotoana voafaritra, voasoratra amin'ny tenin'ireo vazimba teratany. Any amin'ny faritra Mixe, haiko ny momba ny Uxpijy Magazine ao Tlahuitoltepec , izay mamoaka dika amin'ny fiteny roa “ka ny tanjony dia ny handrakitra ireo fahatsiarovana iraisan'ny rehetra izay tsy hoe fotsiny hanome hery ny teny, ny tsiaro ara-tantara, ary ny fahatsapàna ny maha-vazimba teratany ananan'ny vondrom-piarahamonina ayuujk, fa koa sady manokatra fahafahana manao fandraisana anjara, indrindra fa ho an'ireo vehivavy.”
Ny K’a'ajsaj  dia gazety iray mivoaka amin'ny fiteny roa ary azo raisina amin'ny fiteny Maya, avoakan'ny Universidad de Oriente ao Yucatán, izay ny tanjony voalohany dia ny “hizara ny kolontsaina Maya araka ny endrika rehetra isehoany.”
Ao anatin'ity lahatsoratra ity  [pdf], ilay poeta Juchiteca, Irma Pineda, milaza amintsika ny momba ny gazetiboky Neza (ny làlana tsara) izay natonta tany Mexico City, an'ny “The New Society of Juchiteco Students”.
Ny gazetiboky Iguanazul , naorin'i Judith Santopietro, dia mampiroborobo ny literatiora, ny zavakanto, ary ny lovantsofina avy amin'ireo vahoaka vazimba tompontany ao Meksiko. Fanampin'ireo gazety mpiseho aminà fotoana voafaritra, ny Iguanazul koa dia mpanonta cartonera no sady onjampeo mpifindrafindra toerana mifantoka amin'ny famokarana media ao Náhuatl.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/03/120654/
 lahatsoratra ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny Este País: http://estepais.com/site/?p=47759
 Uxpijy Magazine ao Tlahuitoltepec: http://www.witsuk.com/yinet/index.php?option=com_content&task=view&id=359&Itemid=56
 Ny K’a'ajsaj: http://www.uno.edu.mx/index.php?pag=2&id=60
 lahatsoratra ity: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3098/15.pdf
 gazetiboky Iguanazul: http://iguanazul.org
 mpanonta cartonera : http://en.wikipedia.org/wiki/Cartonera